Rimonabant အမှုန့် (168273-06-1) hplc≥98% | AASraw ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါး
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Rimonabant အမှုန့်
SKU: 168273-06-1. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Rimonabant အမှုန့် (168273-06-1) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ကုန်ကြမ်း Rimonabant အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Rimonabant အမှုန့်
အရောင်: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ Crystalline အမှုန့်ကိုချွတ်
အဆီဆုံးရှုံးမှုသံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Rimonabant အမှုန့်
Rimonabant အမှုန့် (CAS 168273-06-1) Sanofi-Aventis ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်တစ်ခု anorectic Anti-အဝလွန်ခြင်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ cannabinoid အဲဒီ receptor CB1 တစ်ခုပြောင်းပြန် agonist ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှု၎င်း၏အဓိက Avenue အစာစားချင်စိတ်ထဲမှာလျှော့ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ Rimonabant အမှုန့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုခံရဖို့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် CB1 အဲဒီ receptor blocker ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Rimonabant အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Rimonabant အမှုန့် 5mg ၏မြင့်မားထိုးဖို့ 20mg တစ်ဦးအနိမ့်ထိုးများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ကလိုအပ်ချက်နှင့်မည်သို့ကြောင့်အစားအသောက်များတွင်ကျွမ်းကျင်သူ၏အကြံပေးချက်ကနေလာရမညျစီမံခန့်ခွဲရန်။ Rimonabant အမှုန့်တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်ဖို့ထွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခါး၏အရွယ်အစားလျှော့ချနေချိန်တွင်လူတစ်ဦး၏သာယာဝပြောရေးကိုတိုးတက်စေရန်သင့်လျော်သောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုနိုင်ဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုရလဒ်များအမျိုးအစားများငါရော် Rimonabant အမှုန့်ကနေမျှော်လင့်နေရမည်
Acomplia အဝလွန်နှင့်ဖြည့်စွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာအတွက်သုံးပြီးအဝလွန်နေသူကလူဆက်ဆံဖို့တီထွင်ခဲ့သည်။ 2nd အမျိုးအစားသူတို့အသွေးနှင့်ဆီးချိုရောဂါအတွက်အဆီကြီးမားသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဖျားနာဖြစ်ကြောင်းလူနာ။
Acomplia လည်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏အစအဦးကိုရပ်တန့်နိုင်မယ့်ရောဂါအဖြစ် Sanofi အားဖြင့်ဖျောင်းဖျခဲ့သည်။ ကြီးမားတဲ့ခါး (88 စင်တီမီတာအမျိုးသမီးများနှင့် 102 စင်တီမီတာယောက်ျား) ရှိသည်သောပြည်သူ့ဒီဆေးဝါး အသုံးပြု. ကနေကြီးမားတဲ့အားသာချက်ရရှိရန်ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ဖြတ်ဆေးလိပ်ဒါဟာ Rimonabant အမှုန့်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်ဖို့ဆေးလိပ်သောက်သူတွေကိုကူညီပေးနိုင်သည်ကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ အခုတော့ Sanofi-Aventis Rimonabant အမှုန့်ဆေးလိပ်သောက်-ချုပ်ရာတစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသမှုကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့သုတေသနလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ STRATUS အစီအစဉ် (Rimonabant အမှုန့်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူလေ့လာရေး) 6,000 ထက်ပိုဘာသာရပ်များရှိပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်ဆေးလိပ်သောက်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုကုထုံးစူးစမ်း။ ပထမဦးစွာတဦးတည်းဖြတ်ရန်ဆေးလိပ်သောက်ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦး quitter အမြတ်အလေးချိန်တားဆီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကွောငျးထငျရှားပထမဦးဆုံးရလဒ်များကို Rimonabant အမှုန့်နှစ်ဦးစလုံးကုထုံးများအတွက်ထိရောက်သောကြောင်းပြသခဲ့သည်။ Sanofi-Aventis သူတို့ကသူ့ကိုတစ်စုံတစ်ရာဖြည့်စွက်လေ့လာမှုများမရှိဘဲမီးခိုး-ချုပ်ရာဆေးဝါးအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ Rimonabant အမှုန့်ရောင်းဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း FDA ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Cochrane က 2007 ပြန်လည်သုံးသပ် Rimonabant အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီး 11 / 2-ခြံ၏အလေးသာနှင့်အတူဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကူညီနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့သည်။
Rimonabant အမှုန့်သောလူသားမြားရှိသည် relapse ၏2အများဆုံးပုံမှန်အတိုင်း Active ထဲက3ခြင်းဖြင့်အစပျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုကင်းရှာကြံပြန်တုံ့ပြန်မှုများစတင်များ၏လုပ်ရပ်လျော့နည်းစေပါသည်။ သူတို့က Cue နှင့် Prime ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစ opiate နှင့်အီသနောရှာကြံ၏အပြုအမူကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။
Tetrahydrocannabinol သင့်ရဲ့ရေတိုမှတ်ဥာဏ်လျော့နည်းစေတဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Rimonabant အမှုန့် (CAS 168273-06-1) ကိုရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အများကြီးပိုကောင်းစေနိုငျသောအယူအဆရှိခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ Suring, ကြွက်တိုတောင်းတဲ့သက်တမ်းကြောင်း၎င်းတို့၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကုဒ်သွင်းခြင်းဖြင့်အံ့သြဖွယ်ရလဒ်ပြသခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်း Rimonabant အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အောက်တိုဘာလ 2008 ခုနှစ်, Acomplia ဆေးပြားအပေါငျးတို့သဥရောပကိုကျော်သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဆေးဝါးအသုံးပြု၏အကျိုးကျေးဇူးများကားကြောင့်အန္တရာယ်များကိုပေး၏။ ဒါဟာ Acomplia စိတ်ရောဂါနှင့်အတူပြဿနာများဖြစ်ကြသည်သောအန္တရာယ်အရှိဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပြီးကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့်ကတစ်ခက်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကခဲ့သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုကြောင့်အစပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်ထက်အများကြီးပိုကြီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လေ့လာရေးသင် Acomplia သုံးပြီးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကို အသုံးပြု. နှစ်ခုဖြစ်ပွားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်, တစ်ဦးစိတ်ရောဂါပြဿနာရှိခြင်း၏အန္တရာယ်အခြားတဦးတည်းသည်ထက် Acomplia နှစ်ခုကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သောနှင့်စျေးကွက်မှဖြန့်ချိခဲ့သည်ပြီးနောက်အချို့သောလက်တွေ့အကြံပြုခြင်းများနှင့်အစီအမံများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကဆဲအန္တရာယ်နှင့်ဤသက်ရောက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းလျော့မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဥရောပပါမောက္ခ၏အချို့အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိန့်အသတ်ပြဿနာများရှိခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက်ထုတ်ကုန်ဥရောပစျေးကွက်များမှယူသှားခဲ့သညျ။ သငျသညျ Acomplia သုံးပြီးနှင့်ရောဂါပျောက်ကင်းဆွေးနွေးရန်လျှင်ထိုသို့သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေအခါသင်သည်သင်၏ဆရာဝန်စကားပြောသင့်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင် Acomplia သင်အလိုရှိသည့်အချိန်တွင်မဆိုတာကိုပြီးအောင်နိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းကြောင့်ကုသမှုဆက်လက်သူမြားလူနာအလေးချိန် loosing ဖြစ်ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကုသမှုရပ်တန့်ခဲ့ကြသောသူတို့, ကိုချက်ချင်းဖြတ်ပြီးနောက်ပြန်အလေးချိန်နီးပါးတဝက်ရှိသည်။ သင်တစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကုသမှုစဉ်နှင့်ပြုလုပ်အပြီးတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့သတိရဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အလေးချိန်ပို loosing သင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပိုမိုထက်နှစ်နှစ်များအတွက်ဆေးဝါးယူကြပြီသောသူတို့အားလေ့လာခဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ Acomplia သင်အမြဲတမ်းစိတျအပွောငျးအလဲနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ သငျသညျသင်သည်သင်၏အသက်တာနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတျပါသို့မဟုတ်စိတ်မသာညည်းတွားခံစားခကျြနဲ့အတွေးရှိခြင်းကြောင်းသတိပြုမိပါလျှင်သင်, ချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်နှင့်မူးယစ်ဆေးတာကိုရပ်တန့်သင့်ပါတယ်။
Acomplia နှစ်နှစ် America မှာလေ့လာခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အချိန်, စိတ်ဓာတ်ကျစိတ်ဆိုးနှင့်စိုးရိမ်ခြင်း၏အခြေအနေနှင့်တူထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်းဆောင်ခဲ့လေ၏။ FDA ကအတည်ပြုတစ်ခါမျှအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Acomplia 2006 အတွက်အီးယူကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပြည်နယ်, သတ်သေကျူးလွန်ပင်ပြည်နယ်နှင့်အတူခိုင်မာသောပြဿနာများ၏သတင်းပေးပို့အခါသမယရှိခဲ့သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့စျေးကွက်ကချွတ်ယူကြ၏။
Synephrine, ဒါမှမဟုတ်သိပိုပြီးလေ့သည်အတိုင်း, ခါးသီးသောလိမ္မော်ရောင်, အရွက်, အသီးများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆေးဝါးအောင်ဖို့အသုံးပြုနှင့်ခွံသူ့ဟာသူရေနံအောင်ကိုအသုံးပြုသည်ရှိကြသည့်အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင်၏ရေနံထိုကဲ့သို့သောပွေးနှင့်အားကစားသမားများခြေလျင်အဖြစ်ကူးစက်မှု, ပြုမူဆက်ဆံကူညီရန်အရေပြားမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
များစွာသောလေ့လာမှုတွေနေဆဲကောက်ယူလျက်ရှိသည်သော်လည်း, တစ်စုံတစ်ဦးကခါးသီးလိမ္မော်သီးတစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာ, ကအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်နိုင်စွမ်း posses ကြောင်းပြသရန်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာစားသုံးသူအများကြီးပိုရှည်များအတွက်အပြည့်အဝခံစားရနှင့်မတရားသောသို့မဟုတ်အပိုအစားအစာကိုစားသုံးရန်အလိုဆန္ဒများအတွက်တစ်စုံတစ်ရာသွေးဆောင်မှုလျော့နည်းစေအောင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတည်မြဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးအဖြစ် synephrine အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်ကိုယ်အလေးချိန်လက္ခဏာကိုပြသနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဒီထက်အစားအစာစားသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်အလှည့်အတွက်, အချိန်တစ်ကာလအတွင်းကိုယ်အလေးချိန်အတွက်ရလဒ်များအရာလျော့နည်းကယ်လိုရီ, စားသုံးကြသည်။
Rimonabant ကုန်ကြမ်း Powder (CAS 168273-06-1)
ကုန်ကြမ်း Rimonabant အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ထံမှ Rimonabant အမှုန့် (CAS 168273-06-1) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Rimonabant ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
အထိရောက်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန် supplement- Rimonabant အမှုန့်
Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့်